nepal rastra bank(nepal rastra bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
– रेखा चन्द काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सकिन अब १६ दिनमात्रै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ। यसैबीच राष्ट्र बैंकले २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई समेत पोखरामा बोलाएको छ। जसमा मौद्रिक नीतिका विषयमा विशेष छलफल हुने बताइएको छ। यसो त राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट...
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा मंगलबार एकैदिन ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार १४ गते (मंगलबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै कुल निक्षेप ४९ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार १३ गतेसम्म कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो एक दिनमा...
काठमाण्डौ । सरकारले अल्पकालीन अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन ट्रेजरी बिल जारी गर्दै आएको छ। सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गर्छ। यस्ता ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा...
सेयरमा भन्दा ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्नु सुरक्षित: पूर्वगभर्नर क्षेत्री
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट कायमै छ। मुद्रास्फीति पनि बढेको छ। बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर डबल डिजिटमा रहेको छ। कर्जाको ब्याजदर पनि बढेकै छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गर्दै आएको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि ११.०६ प्रतिशत पुगेको छ। ट्रेजरी बिल्ससँगै बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक...
शुक्रबार गभर्नरसहित वाणिज्य बैंकका सीइओहरु किन जाँदैछन् पोखरा ?
-रेखा चन्द काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार १७ गते (शुक्रबार) वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई पोखरा बोलाएको छ । राष्ट्रबैंकले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत सबै सीईओहरुलाई पोखरा बोलाएको हो । मौद्रिक नीतिको बिषयमा छलफल गर्ने तथा नेपालको आफ्नै डिजीटल करेन्सी बनाउने लगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्धेश्यसहित राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना...
काठमाण्डौ । बैंकिङमा एकैदिन ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार १२ (आइतबार) बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार ११ गते कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। वाणिज्य...
रु. १५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, मंगलबार बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८४ ‘ज’ जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले असार १५ गते ५ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र भोलि असार १४ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ। यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी,...
लघुवित्तहरुको कुल सम्पत्ति र जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्यो
काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति र जोखिम भारित सम्पत्ति दुवै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति र जोखिम भारित सम्पत्ति दुवै बढेको हो। यो अवधिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड पुगेको...
थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको कर्जा प्रवाह १८.२०%ले बढ्यो, एनपीएलमा सुधार
काठमाण्डौ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा तथा सापटीमा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्मको स्थितिको तथ्यांकबाट यस्तो देखिएको हो। तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतसम्ममा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय �...
कस्तो छ बैंकहरुको सीडी रेसियोको पछिल्लो अवस्था ?
काठमाण्डौ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हिजो शनिबारसम्म तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो औषत ९० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ। गत शुक्रबार औसत सीडी रेसियोमा ८९.३५ प्रतिशत रहेकोमा शनिबार थोरै बढेर ८९.३७ प्रतिशत पुगेको...
रु. २६.१० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, भोलि बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि असार १३ गते (सोमबार) २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले असार १४ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो बिल साउन १० गते...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असर्फीको दैनिक बिक्री मूल्य निर्धारणमा संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद, टकमरी र बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन गर्दै असर्फीको दैनिक बिक्री मूल्यमा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले कार्यविधिबमोजिम गणना गरिएका आधारमा मूल्यमा टकमरी गर्दाको...